Kacdoonka dadweynaha Suuriya - BBC News Somali
Kacdoonka dadweynaha Suuriya
Image caption kacdoonka dadweynaha suuriya
Kacdoonnada iyo mudaharaadyada dalka Suuriya oo socdey ilaa shantii toddobaad ee ugu danbeeyey ayaa ku sii faafaya magaalooyinka dalka, in kasta oo dawladdu ay ku dhawaaqaday tallaabooyin wax lagaga bedelayo nidaamkii hore ee gudaha dalkaasi.
Dawladdu waxay ku dhawaaqday inay qaadday xukunkii degdegga ahaa ee dalkaasi ka jirey ilaa 50 kii san ee ugu danbeeyey. Waxa kale oo ay baabiisay maxkamaddii badbaadada ee maxaabiista siyaasadda. waxana la soo rogey sharciyo cusub oo ku saabsan mudaharaadyada.
Hase ahaatee, in kasta oo dawladu ugu talo gashay tallaabooyinkani inay qaboojiyaan kacdoonka iyo cabashada dadweyaha, haddana waxa halkoodii ka sii socda mudaharaadyadii oo kuwii ugu danbeeyey ay ka dhaceen magaalooyin ay ka mid yihiin Ximsi oo ah magaalada 3-aad ee ugu weyn, iyo magaalada kale ee Banias oo ku taalla xeebta dalkaasi.
Isku-dhacyo wata taxshiirado ayaa ka dhacay magaalada Ximsi, waxana dawladdu ay xoog kala hortagtay mudaharaadyadii, waxana dhaawacmay dadweyne fara badan. Dadka ku nool magaaladu waxa kale oo ay sheegeen in la hareereeyey masaajidyada, lana baadhay; iyo in dadweynihii ay ku kalliftay inay ku tukadaan fagaarayaasha bannaanka.
Dawladdu waxay sheegtay in dalka ay la soo gudboonaadeen kacdoonno hubaysani, laakiin dadweynaha mudaharaadayaa waxay ku doodayaan inay yihiin isbedel-doon, sida ka socota dalal badan oo kale oo ka tirsan dawlaha Carbeed.